Sidee inuu ka soo kabsado Photos oo keliya ka kaabta iPhone
> Resource > iPhone > Sidee inuu ka soo kabsado Photos oo keliya ka kaabta iPhone
About gurmad iPhone
Sida dadka isticmaala iPhone, dad badan oo u isticmaali Lugood si ay u maareeyaan xogta ku saabsan iPhone ay. Marka aad u hagaagsan iPhone la Lugood, waa in aad dareentay in Lugood mar walba oo taageeray ilaa xog ku saabsan iPhone hore. Haa, faylka gurmad waa gurmad iPhone. Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato waa in Lugood sida caadiga ah ka dhigaysa gurmad file hal iPhone ah. Taasi waa in la yidhaahdo, waxa kaliya Wararka file gurmad ah marka aad u hagaagsan iPhone way la danbe.
Sidoo kale, waxa aanu kuu ogolaanaysa inaad ku eegaan ama qaadan xogta ka mid ah raad raac ah. Marka aad rabto in aad xogta gurmad, waxaad soo celin karaa oo keliya gurmad oo dhan si aad u iPhone iyo bedelo oo dhan xog jirta ee ku yaal. Maxaa dhacaya haddii aad rabto in aad sawiro oo kaliya on gurmad iPhone?
Sidee inuu ka soo kabsado sawiro oo kaliya laga gurmad iPhone
Waxaad ma karo si toos ah sawiro ka gurmad iPhone ka qaadan, xitaa waxaad ka helaysaan on your computer. Ayaa gurmad iPhone looma ogola inuu Falanqeynta. Waxaad si toos ah 't furi karaa. Si aad u ku eegaan, waxaad u baahan tahay in ay ku tiirsan yihiin qalab dhinac saddexaad sida Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) , kaas oo kaa caawin kara inay soo saaro file gurmad ah. Markaas waxaad ku eegaan karo iyo eegista soo kabsado sawiro ka gurmad iPhone. Macluumaadka kale ayaa sidoo kale lagu soo kabsaday kartaa haddii aad rabto.
Waa wax iska fudud quruxsan. Uma baahnid in aad qabto wax xirfad ah ama computer aqoonta xirfadeed. Geedi socodka oo dhan oo keliya qaadataa 2 tallaabooyinka. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa iskaan, eegis iyo soo kabsado. Aan ka soo bixi version maxkamadda hoose si aad u leeyihiin a day hore.
Waxba ma ahan in aad isticmaasho computer Windows ama Mac ah, geeddi-socodka waa isku mid ilaa xad. Just download version u dhigma si aad u computer. Ku rakib iyo waxa maamula si loo soo celiyo sawiro ka gurmad iPhone adigoo raacaya tilmaan-hoose.
Tallaabada 1. Waraaqda aad iPhone gurmad file
Ka dib markii socda barnaamijka, u tag hab kabashada kale, ka soo kabsado Lugood ee kaabta File, meesha ugu sareysa ee suuqa hoose. Markaas software si toos ah ka heli doontaa dhammaan faylasha gurmad iPhone jira on your computer, oo uu soo taagaa sida liiska ku furmo suuqa. Hadda, waxaad u baahan tahay in ay doortaan mid ka mid ah si aad u iPhone, ama mid aad rabto in aad soo saaro. Markaas riix Start Scan badhanka si ay u bilaabaan.
Tallaabada 2. Soo Celinta sawiro ka gurmad iPhone
Markii barnaamijka ku dhameysatay soo saarida gurmad iPhone, waxaad bilaabi kartaa previewing dhammaan macluumaadka aad gurmad iPhone hadda. Dhammaan waxyaabaha waxaa loo kala saaraa kooxo sida kitaabkii duudduubnaa camera, il sawir, xiriirada, fariimaha iyo sidaas. Photos Ujrooryinka kaga imaanayo iPhone, waxaad iyaga ku eegaan karo Roll Camera iyo Photo Stream mid mid. Sax waxyaabaha aad rabto iyo waxaan iyaga ku badbaadin on your computer adigoo gujinaya Ladnaansho .
Ka sokow sawirada jira in gurmad iPhone, Wondershare Dr.Fone ee macruufka sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo kabsado photos tirtiray ka file gurmad ah, oo aan aad ka heli karto by si toos ah dib u soo celinta si iPhone.
Fiiro gaar ah: Haddii aad isticmaasho iPhone ah 4 ama iPhone 3GS, waxaad isticmaali kartaa habka soo kabashada kale: Ladnaansho foomka macruufka Device, si toos ah baarista iPhone iyo kabsado photos tirtiray waxa on.
Download version maxkamadda hoose si aad u leeyihiin isku day ah hadda!
Sida loo Xulo Soo Celinta Photos ka kaabta Lugood
Sida loo ogolaan in aad iPhone Nadiif ah